Lanonana nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany teny amin'ny Antenimierampirenena | Primature
Lanonana nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany teny amin’ny Antenimierampirenena
1 mai 2018 8 mai 2018
Antananarivo, faha 1 May 2018 – Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asa ny fisokafan’ny fivoriana ara-potoana andiany voalohany teny amin’ny Antenimierampirenena, ka tonga nanotrona ny lanonana ny governemanta notarihin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, ary olo-manan-kaja maro avy amin’ny rafi-pitondrana misy. Ny filohan’ny Antenimiera no nitarika izany ary nanao antso avo ho amin’ny fitoniana, manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Raha nanontaniana kosa ny Lehiben’ny governemanta amin’ny maha-Praiminisitra azy dia nanambara fa « tsy fotoana hifandrangitana sy hifanafintohinana intsony izao, ary tsy fotoana hitadiavana hoe iza no manana ny marina na iza no diso, fa fotoana izay tokony hitadiavana marimaritra iraisana foana sy hiverenana an-databatra boribory hifampiresaka ». Nanentana ny mpanao politika rehetra ny Praiminisitra, na ireo ao anaty fitondrana na ireo mpanohitra, mba hitodika amin’ny tombontsoa ambonin’ny Firenena sy mba hijery izay fomba ahafahana mifampiresaka hamahana izao olana izao.
Nomarihiny fa araka ny lalampanorenana dia androany no misokatra ny fivoriana ara-potoana eo anivon’ireo Antenimiera roa : « heveriko fa fotoana tokony hiverenana indray ato amin’ny rafitra ara-dalàna hisian’izay adihevitra izay, amin’ny maha-tany demokratika, ary mino ny fahendren’ny tsirairay aho, mino fa tena mbola mibitsika amin’ny tsirairay ny fitiavan-tanindrazana. Mino aho fa hiroso ary hilamina fehizay ity Madagasikara ity satria tsy natao ho an’olom-bitsy ny fitondràna fa ho antsika rehetra ».
Mikasika ny ezaka tohy vakana ataon’ireo mpiara-miombon’antoka avy any ivelany hamahàna ny olantsika dia « sahiko ny milaza fa ny vahaolana dia isika Malagasy ihany no mahafantatra ny mahasoa antsika ka aoka mba ho entanin’izay soa toavina maha-malagasy izay ny fon’ireo mpanao politika tsirairay avy, mba hiverenana an-databatra boribory, hitadiavana ny vahaolana izay tena mahasoa ny Malagasy, na inona na inona hevitra tsy mitovy.. », hoy ihany ny Praiminisitra.
← Conseil du Gouvernement du Mardi 24 Avril 2018
Fanomezan-danja ny vita malagasy : Lanonana fanolorana fiarakodia “Karenjy” ho an’ny Ministeran’ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina →
Descente du Premier ministre dans la Région DIANA